VAVA SIMA SY VAKY LANILANY : Hisy fandidiana maimaim-poana eto Mahajanga · Aponga
Hanatanteraka indray ny hetsika «opération smile» izy ireo, ka ireo olona tratry ny fahasembanana eo amin’ny vava na koa ny vava sima sy vaky lanilany no hisitraka izany asa soa izany. Maimaimpoana avokoa ny fitsaboana mandritra sy aorian’ny fandi diana, izay mety haharitra hatramin’ny 10 andro ka tafiditra amin’izany ny saran-dalana mandroso sy miverina ho an’ireo monina lavitra.
Efa afaka misoratra anarana eny amin’ny BAS na bureau d’assistance sociale na koa eny amin’ny Bmh izay maniry hodidiana. Ny vahoakan’i Mahajanga sy ny eto amin’ny faritr’i Boeny no voakasik’izao asa soa izao. Manentana izay manana fahasembanana amin’ny vava ka mila io fitsaboana io ny Dr Vanombelina ao amin’ny Bmh mba hanararaotra izao fotoana izao, satria lafo dia lafo ny fandidiana io fahasembanana io ary mila fitaovana matihanina.
Voafetra ihany koa ny isan’ireo olona hotsaboina. Manao antso avo ho an’ireo olona tsara sitrapo manan-talenta rehetra ihany koa mba hiara- hiasa amin’io fikambanana tsy miankina io hanampy azy ireo mandritr’izany hetsika izany. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manatona ny bureau d’as sistance sociale na miantso ny 034 1440133.